Xaaladda Suuqgeynta Raadinta ee 2015 | Martech Zone
Isniin, April 20, 2015 Douglas Karr
Waxaan dhawaan lahadlay koox si isdaba joog ah laygu casuumay si aan ulahadlo 5tii sano ee lasoo dhaafay. Hal dhibic wadahadalka mawduuca wuxuu u weecday adeegsiga erayga muhiimka ah. Daamanka ayaa hoos u dhacay markii aan dhagaystayaasha u sheegay inay joojiyaan ka walwalka cufnaanta keyword iyo adeegsiga inta ay ka kooban yihiin oo dhan. In kasta oo aan wali u maleynayo in eray fure uu weyn yahay in looga faa'iideysto cinwaanka boostada, inteeda badan waxaan aaminsanahay inaad ka fiicnaan laheyd inaad diirada saarto qorista si fiican halkii aad isku dayi lahayd inaad wax u qorto makiinadaha raadinta.
Taasi run ma ahayn dhowr sano ka hor, annaga loo baahan yahay inuu noqdo barnaamij si mashiinnada raadinta ay u fahmaan macnaha guud ee ka kooban waxyaabahayaga. Laakiin waa waxaan aaminsanahay hadda in horumarka Google ay tixgelinayaan tan isbeddellada ah - oo ay ku jiraan taariikhda goobta, awoodda mawduuca qoraaga, xigashooyinka sida magacyada calaamadaha, magacyada wax soo saarka iyo juqraafi ahaan - si loo go'aamiyo ku-habboonaanta, awoodda iyo ugu dambeyn darajooyinka bogagga.
Markii ay i weydiiyaan dadka bilaabaya ganacsiyo cusub oo ay tahay inay diirada saaraan suuqgeynta internetka, suuqgeynta raadinta badanaa waxay ku dhowdahay dusha sare ee tallada. Dabcan waxay kuxirantahay heerka ujeedada macaamilka ama dalabka adeega cusub, yacni inta qof ee raadineysa alaabada iyo adeegyada. Muhiimadda ay leedahay suuqgeynta raadinta maanta waxaa lagu muujiyey noo cusub ee infographic abuuray oo ay abuureen Suuqgeynta JBH. Waxay ku tusin muhiimada sawirka raadinta xogta ugu dambeysay Sidoo kaleWeb heerka baahida macaamiisha iyadoo loo marayo raadinta oo ay ku jiraan talooyin wax ku ool ah iyo falanqeyn ka socota meelaha ugu sarreeya qaarkood si looga barto raadinta sida Moz, Gaadhiga Mashiinka Raadinta iyo Raadinta qalabka. Dave Chaffey
Xogtani waxay jajabineysaa dhulka ganacsiga suuq geynta si wanaagsan, oo ay ku jiraan labadaba raadinta lacagta leh (Bixi guji kasta) iyo raadinta dabiiciga ah (darajada dabiiciga ah). Suuqgeynta mashiinka raadinta ayaa wali ah mid dhexdhexaad ah oo khadka tooska ah waana inaan la iska indhatirin. Halka ma nihin taageerayaal baaxad weyn oo ka tirsan warshadaha SEO iyo istiraatiijiyado wax isdaba marin ah oo la taliyayaashu inta badan gaystaan ​​oo macaamiishooda geliya halista in la cadeeyo, wali waa ilo aan caadi aheyn oo macaamiisheenu ay ku aqoonsadaan waxa ay rajadoodu raadineyso iyo sida ay uga jawaabayaan nuxurka ku qoran ee lala wadaago macaamiisheenna. 'Goobaha iyo kuweenna.
Tags: 2015Dave Chaffeyjbhraadinta suuq-geynta suuq-geyntaaragtiyo caqli badancaqli-gal ahgobolka suuq raadinta